Aeternity စျေး - အွန်လိုင်း AE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Aeternity (AE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Aeternity (AE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Aeternity ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
AE – Aeternity
Market ကဦးထုပ်: $54 572 874.00
volume_24h_usd: $35 088 100.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Aeternity တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Aeternity များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AeternityAE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.177AeternityAE သို့ ယူရိုEUR€0.15AeternityAE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.136AeternityAE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.161AeternityAE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.58AeternityAE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.12AeternityAE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.93AeternityAE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.661AeternityAE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.235AeternityAE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.247AeternityAE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.96AeternityAE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.37AeternityAE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.962AeternityAE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹13.24AeternityAE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.29.81AeternityAE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.243AeternityAE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.269AeternityAE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.5AeternityAE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.23AeternityAE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥18.92AeternityAE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩209.53AeternityAE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦67.87AeternityAE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽13.07AeternityAE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.87
AeternityAE သို့ BitcoinBTC0.00002 AeternityAE သို့ EthereumETH0.000461 AeternityAE သို့ LitecoinLTC0.00326 AeternityAE သို့ DigitalCashDASH0.00195 AeternityAE သို့ MoneroXMR0.00199 AeternityAE သို့ NxtNXT13.81 AeternityAE သို့ Ethereum ClassicETC0.0261 AeternityAE သို့ DogecoinDOGE51.09 AeternityAE သို့ ZCashZEC0.00215 AeternityAE သို့ BitsharesBTS5.45 AeternityAE သို့ DigiByteDGB5.66 AeternityAE သို့ RippleXRP0.629 AeternityAE သို့ BitcoinDarkBTCD0.0061 AeternityAE သို့ PeerCoinPPC0.587 AeternityAE သို့ CraigsCoinCRAIG80.67 AeternityAE သို့ BitstakeXBS7.55 AeternityAE သို့ PayCoinXPY3.09 AeternityAE သို့ ProsperCoinPRC22.21 AeternityAE သို့ YbCoinYBC0.0001 AeternityAE သို့ DarkKushDANK56.82 AeternityAE သို့ GiveCoinGIVE383.47 AeternityAE သို့ KoboCoinKOBO40.34 AeternityAE သို့ DarkTokenDT0.163 AeternityAE သို့ CETUS CoinCETI511.37